ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်
ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန် သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် ၅ ခုအနက် ပထမဦးဆုံး တည်ထောင်ခဲ့သော ကျောင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် အမှတ်မြင့်ကျောင်းသားများ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ကျောင်းသား ဦးရေ ၆၀ဝ ဝန်းကျင်ခန့်ကို လက်ခံသင်ကြားပေးသည်။ ဆေးပညာဘွဲ့ (MBBS) အပ်နှင်းသော ကျောင်းဖြစ်သည်။ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်တွင် တက္ကသိုလ် ပရဝုဏ် ၃ ခုရှိသည်။ လမ်းမတော်တွင်တစ်ခု၊ ပြည်လမ်းတွင်တစ်ခု (လိပ်ခုံးကျောင်း ဟူ၍လည်း သိကြသည်)၊ သထုံလမ်းတွင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လမ်းမတော်ဆေးကျောင်းမှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး (Yangon General Hospital)၊ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံသစ်ကြီး (ဂျပန်ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဂျကာ (JICA) ဆေးရုံ ဟုလည်း အမည်တွင်သည်)တို့ အနီးတွင်ရှိသည်။ လိပ်ခုံးကျောင်းမှာ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဌာန အနီးတွင်ရှိသည်။
ဥပဌာနံ၊ အနုကမ္ပာ၊ ဒယာ
upaṭhānaṃ, anukammā, dayā
တည်ထောင်ခုနှစ် ၁၉၂၇၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂)ရက်
ပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး
တည်နေရာ *လမ်းမတော် (မိန်း)
ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၊ သထုံလမ်း
လက်ရှိ ပါမောက္ခချုပ်မှာ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (စီမံ)မှာ ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ငြိမ်း နှင့် လက်ရှိ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြားရေး)မှာ ဒေါက်တာခင်မာမြင့် ဖြစ်သည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်သည် Educational Commission for Foreign Medical Graduates က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသိအမှတ်ပြုသော ကျောင်း ၅ ကျောင်းအနက် တစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။
၄.၁ ပထမနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်
၄.၂ ဒုတိယနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်
၄.၃ တတိယနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်
၄.၄ နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(က) အမ်ဘီဘီအက်စ်
၄.၅ နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(ခ) အမ်ဘီဘီအက်စ်
၅ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ကျောင်းသားဟောင်းများ
မြန်မာပြည်တွင် ဆေးကျောင်းများကို ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဝင်းအတွင်းတွင်စတင်တည်ထောင်သည်။ ထိုစဉ်ကသင်တန်းကာလ မှာ ၄နှစ်ဖြစ်ပြီး Licentiate Medical Practice(L.M.P) course ဟုခေါ်သည်။ ထိုသင်တန်းအောင်မြင်သူများကို L.M.P လက်မှတ်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၃-၁၉၂၄ ပညာသင်နှစ်တွင်မူ ဆေးပညာဘွဲ. M.B.,B.S သင်တန်းကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဝင်းအတွင်းရှိ လက်ရှိ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဌာန နေရာတွင်စတင်သည်။
၁၉၆၄ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်ကို ပါမောက္ခချုပ်မှ ဦးဆောင်အုပ်ချုပ်သည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ပါမောက္ခချုပ်များမှာ -
၁၉၆၄-၁၉၇၀ သီရိပျံချီ ပါမောက္ခ ဦးဘသန်း
၁၉၇၁-၁၉၇၂ ဒေါက်တာ ဦးဖေကျင်
၁၉၇၂-၁၉၈၄ ဒေါက်တာ ဦးထွန်းမင်း
၁၉၈၄-၁၉၈၇ ပါမောက္ခ ဦးလှမြင့်
၁၉၈၇-၁၉၈၈ ပါမောက္ခ ဦးတင်အောင်စိုး
၁၉၈၈-၁၉၉၁ ပါမောက္ခ ဦးမောင်မောင်စိန်
၁၉၉၁-၁၉၉၆ ပါမောက္ခ ဦးမြဦး
၁၉၉၆-၁၉၉၇ ပါမောက္ခ ဦးကျော်မြင့်ထွန်း
၁၉၉၇-၁၉၉၈ ပါမောက္ခ ဦးကျော်မြင့်
၁၉၉၈-၂၀၀၇ ပါမောက္ခ ဦးမျိုးမြင့်
၂၀၀၇-၂၀၀၉ ပါမောက္ခ ဦးအေးမောင်ဟန်
၂၀၀၉-၂၀၁၁ ပါမောက္ခ ဦးဖေသက်ခင်
၂၀၁၁-၂၀၁၃ ပါမောက္ခ ဦးသန်းချို
၂၀၁၃-၂၀၁၅ ပါမောက္ခ ဦးသက်ခိုင်ဝင်း
၂၀၁၅-၂၀၂၀ ပါမောက္ခ ဦးဇော်ဝေစိုး
ပထမနှစ် ၁ နှစ်
ဒုတိယနှစ် ၁ နှစ်ခွဲ
တတိယနှစ် ၁ နှစ်
စတုတ္ထနှစ် ၁ နှစ်
ပဉ္စမနှစ် ၁ နှစ်ခွဲ
အလုပ်သင်ဆရာဝန် ၁ နှစ်
ပညာသင်နှစ်စုစုပေါင်း ၇ နှစ်
သင်္ချာ နှင့် စာရင်းအင်း ပညာ
ဇီဝကမ္မဗေဒ နှင့် ဇီဝဓာတုဗေဒ
သင်ကြားရေး ဆေးရုံများရှိ ဆေးကုသဆောင်နှင့် ခွဲစိတ်ကုသဆောင်များတွင် ဆေးပညာလက်တွေ့သင်တန်းပေးခြင်း ၁၈ပတ်
နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(က) အမ်ဘီဘီအက်စ်ပြင်ဆင်
ကာကွယ်ရေးနှင့် လူမှုရေးဆေးပညာ (နယ်ကွင်းဆင်းသင်တန်း ၃ပတ်)
ရောဂါဗေဒ နှင့် သွေးပညာ
သင်ကြားရေး ဆေးရုံများတွင် ဆေးပညာ၊ ခွဲစိတ်ကုပညာ၊ သားဖွားနှင့် မီးယပ်ရောဂါကုပညာများနှင့် ပတ်သက်သော သင်ကြားပို့ချချက်များကို နားထောင်ပြီး လူနာဆောင်များနှင့် ဆေးခန်းများတွင် လေ့လာသင်ယူရသည်။ မြို့ပြကျန်းမာရေးဌာနများသို့လည်း ကာကွယ်ရေးနှင့် လူမှုရေးဆေးပညာဘာသာရပ်အတွက် သွားရောက်လေ့လာရသည်။
နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(ခ) အမ်ဘီဘီအက်စ်ပြင်ဆင်
နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(ခ) အောင်မြင်ပြီးဆုံးသူတိုင်း ရန်ကုန်(သို့မဟုတ်) တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ရှိ သင်ကြားရေးဆေးရုံများတွင် အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် ၁နှစ်တာ လက်တွေ့ပညာသင်ယူရသည်။ လက်တွေ့သင်ယူရသော အချိန်ကာလများမှာ-
ကလေးကျန်းမာပညာ ၂ လခွဲ
ပြည်သူ့အကျိုးပြု ဆေးပညာ ၂ ပတ်
ဆေးပညာ(စိတ်ရောဂါကုသမှုပညာ အပါအဝင်) ၃ လ
သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဆေးပညာ ၃ လ
ခွဲစိတ်ကုပညာ(ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဆေးပညာ အပါအဝင်) ၃ လ
အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် ၁နှစ်တာ လက်တွေ့ပညာသင်ယူပြီးမှ ဆေးပညာဘွဲ့ (M.B.,B.S.) အပ်နှင်းခြင်း ခံရသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆေးတက္ကသိုလ်_(၁)_ရန်ကုန်&oldid=694503" မှ ရယူရန်
၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။